Kuvhura Mhemberero yeBKWELL JWELL DWELL Kunze Hofisi muThailand - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Kuvhura Mhemberero yeBKWELL JWELL DWELL Kunze kweHofisi muThailand
Nguva: 2019-07-09 Hits:
Shamwari dzemasangano emaindasitiri muChina neThailand vakapinda mukuvhura Mhemberero yeBKWELL JWELL DWELL Kunze Hofisi.
Vatungamiriri veChina Plastics Association vakataura mumashoko ekukorokotedza kuti Jwell ndiye mutevedzeri wemutungamiri weChina Plastics Machinery Industry Association uye mutungamiri weindasitiri muChina extrusion michina indasitiri kwemakore masere. Jwell anokurudzira anoshingaira uye mutungamiri mumapurasitiki, mapaipi uye machira enzvimbo dzemuchina. Nekusimudzira kweChina hupfumi, isu tinowanzo kuve mugadziri kune iye musiki. Zvinotarisirwa kuti kuumbwa kwehofisi yeThailand kuchapa rutsigiro nerubatsiro kune mamwe mabhizinesi muChina indasitiri yepurasitiki mhiri kwemakungwa.
Mr.HE Haichao, sachigaro weJwell Company, vakatenda vashanyi, shamwari nevashandi vese vakapinda musangano wekuvhura hofisi. Jwell vanhu vanonzwa mutsa kubva kuThailand. Tichavimbisa kuti tinoedza nepatinogona napo kushandira vatengi vedu muThailand neSoutheast Asia.
Kubva 2004, JWELL anga achitengesa screws uye extruders muThailand. Mune ramangwana, Hofisi yeThailand icharamba ichigadzira kukosha kwevatengi nezvigadzirwa zviri nani uye nemasevhisi ari nyore kuburikidza nehunyanzvi, sevhisi uye manejimendi ekuvandudza.
In ichi kuratidzwa InterPlas Thailand muna 2019, taiva itsva mhando extruder, crusher, ichivhuvhuta Kuumbwa muchina uye zvichingodaro.
BKWELL yakaratidza otomatiki furidza kuumba muchina mune dumba neepamberi tekinoroji iyo ine yakafara kushanda mumapepa, zvezuva nezuva zvinodiwa, zvekurapa nemamwe maindasitiri.
址 址 Kero:
Mapeji: 89/11, เอ็น เตอร์ ไพรส์ พาร์ ค, บางนา, กรุงเทพ ๆ, ไ ไทย.
89/11 ， Enterprise Park, Bangna, Bangkok
[email inodzivirirwa];[email inodzivirirwa];[email inodzivirirwa]
载 兼程 廿二 载 不忘 不忘 初 百年
Makore ekutanga, Jwell akaisa mahofisi muThailand, Turkey, India, Vietnam, Bangladesh, Russia, North America nedzimwe nyika. Tinogona kupa yedu yakanaka sevhisi kune vatengi vedu.
KUMASHURESHANGHAITEX 2019 TIKUGARAI KUJWELL
NEXTJwell PEEK PPSU POM Sheet Tsvimbo Yekuwedzera Mutsara